ထုတ်ကုန်များ > 4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine (42754-96-1)
CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအောက်မှာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် 4,6-Dichloro-1H-pyrazolo အမြောက်အမြားထုတ်လုပ် synthesize နှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း [3,4-ဃ] pyrimidine (42754-96-1)
လူ့သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ (HPV ပိုး) ကအဆိုပါရောဂါကူးစက်ကမ္ဘာတဝှမ်းအများအပြားကင်ဆာရောဂါ၏မူလအစသည်။ ဘရာဇီးအချို့ဒေသများရှိ, သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ carcinoma နေဆဲမိန်းမတကာတို့ထက်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပွားမှုနှင့်အတူကင်ဆာဖြစ်ပါတယ်။ HPV ပိုးခြင်းဖြင့် epithelial ဆဲလ်အသွင်ပြောင်းပြီးနောက်အတော်ကြာမော်လီကျူးဖြစ်ရပ်များအတွက်ကင်ဆာ phenotype အတွက်ရရှိလာတဲ့, ရှုလေ့လာကြသည်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုငါတို့သည် HPV ပိုးကူးစက်ရာမှအချက်ပြ transduction လမ်းကြောင်းအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိသည့်ပွောငျးလဲအပေါ်အခြေခံပြီး, သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာအပေါ်အလေးပေးအတူလူ့ HPV ပိုး-related carcinoma အတွက်ကုထုံးကြားဝင်များအတွက်အလားအလာမော်လီကျူးပစ်မှတ်ဆွေးနွေးပါ။ tyrosine kinase receptors နှင့် signal ကို transduction နှင့် angiogenesis တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်အခြား kinases ဖို့အထူးအာရုံစိုက်မှုနှင့်အတူဤရောဂါဗေဒကိုပြောင်းလဲ HPV ပိုး-related carcinoma အတွက် anticancer ကုထုံးများအတွက်ဝတ္ထုပစ်မှတ်အဖြစ်အကဲဖြတ်နေကြသည်။
MDL အရေအတွက် MFCD09835493
InChI Key ကို CTYPROOLWJDUTA-UHFFFAOYSA-N ကို
ဓာတုအမည်သို့မဟုတ်ပစ္စည်း 4,6-Dichloro-1H-pyrazolo [3,4-ဃ] pyrimidine
မော်လီကျူးအလေးချိန် (ဆ / mol) 189.005
အပြုံး ClC1 (= NC (Cl) = C2 (ကို C = NNC2 (= N1)))
အရည်ပျော်မှတ် 140-149 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo [3,4-ဃ] pyrimidine (42754-96-1) အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကိုင်တွယ်မှု
ဒီဇိုင်းပေါင်းစပ်, Anti-အကျိတ်လုပ်ဆောင်မှုနှင့် quinazoline နှင့် pyrido ၏မော်လီကျူးမော်ဒယ် [2,3-ဃ] epidermal growth factor receptor ပစ်မှတ်ထား pyrimidine အနကျအဓိပ်ပါယျ
ဝတ္ထု quinazoline နှင့် pyrido သုံးခုစီးရီး [2,3-ဃ] pyrimidine အနကျအဓိပ်ပါယျ EGFR tyrosine kinase ငါးလူ့ကင်ဆာဆဲလ်လိုင်းများတစ် panel ကိုတားစီးဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်များအတွက်, ဒီဇိုင်းဖန်တီးခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓါတုဗေဒ 2016 ၏ဥရောပဂျာနယ်
လူ့သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ-related ကင်ဆာအတွက်ကုထုံးကြားဝင်များအတွက် molecular ပစ်မှတ် (ပြန်လည်သုံးသပ်မှု)
လူ့သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ (HPV ပိုး) ကအဆိုပါရောဂါကူးစက်ကမ္ဘာတဝှမ်းအများအပြားကင်ဆာရောဂါ၏မူလအစသည်။ ဘရာဇီးအချို့ဒေသများရှိ, သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ carcinoma နေဆဲမိန်းမတကာတို့ထက်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပွားမှုနှင့်အတူကင်ဆာဖြစ်ပါတယ်။
ကင်ဆာ 2010 အစီရင်ခံစာများ
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo [3,4-ဃ] pyrimidine (42754-96-1) အစုလိုက်မှာယူမှု & စျေးနှုန်း:
အဘို့အ 1 ပြန်လည်သုံးသပ် 4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine (42754-96-1)
ကျနော်တို့ synthesize နှင့်အခြားဓာတုပစ္စည်းများအကြား, 4,6-Dichloro-1H-pyrazolo [3,4-ဃ] pyrimidine အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်။ APICMO မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန် CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစည်းမျဉ်းများနှင့်အတူလိုက်လျော။
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[3,4-d]Pyrimidine (42754-96-1) Description
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo [3,4-ဃ] pyrimidine heterocycles, pyrimidines နှင့်ဆက်စပ်အဆောက်အဦလုပ်ကွက်ကဲ့သို့တူညီသောကဏ္ဍကျရောက်ပါတယ်။
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo [3,4-ဃ] Pyrimidine (42754-96-1) ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်များ
နာမ် · 4,6-dichloropyrrolo [2,3-ဃ] pyrimidine
· 4,6-Dichloropyrazolo [3,4-ဃ] pyrimidine
· 4,6-Dichloro-2H-pyrazole [3,4-ဃ] pyrimidine
· 1H-Pyrazolo [3,4-ဃ] pyrimidine, 4,6-dichloro-
· 4,6-Dichloro-1H-Pyrazolo [3,4-D ကို] Pyrimidine
Monoisotopic အစုလိုက်အပြုံလိုက် (ဆ / mol) 187.966
မော်လီကျူးအလေးချိန် (ဆ / mol) 188.999
အရည်ပျော်အမှတ် (C) 140-149
IUPAC name ကို 4,6-dichloro-1H-pyrazolo [3,4-ဃ] pyrimidine
သိပ်သည်းဆ (ဆ / စင်တီမီတာ3) 1.792
ဓာတုနာမကိုအမှီ 4,6-Dichloro-1H-Pyrazolo [3,4-D ကို] Pyrimidine
အဘယ်သူမျှမ CAS ။ 42754-96-1
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo [3,4-ဃ] Pyrimidine ဓာတုနှင့်ကာယ Properties ကို
ဒါကြောင့်လည်းအမှုန့်သို့မဟုတ်အစိုင်အခဲ form မှာတည်ရှိသော်လည်းအဆိုပါထုတ်ကုန်, အဝါရောင်ဖျော့အရည်ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ခံသူ -3ယူနစ်
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo [3,4-ဃ] pyrimidine သာမန်အခြေအနေများအောက်တွင်တည်ငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ အပူ, ဓာတ်အေးဂျင့်များ, အက်ဆစ်, ဒါမှမဟုတ်အခြေစိုက်စခန်းများနှင့်ထိတွေ့သည့်အခါကိုယ်ကသာ decomposes ။
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo [3,4-ဃ] Pyrimidine (42754-96-1) တွက်ချက် Properties ကို
XLogP3-AA ကို 2.1
Topological ဝင်ရိုးစွန်းမျက်နှာပြင်ဧရိယာ 54.5 တစ် ^ 2
ဝင်ရိုးစွန်းမျက်နှာပြင်ဧရိယာ 54.46 တစ်ဦး2
မျက်နှာပြင်တင်းမာမှု (dyne / စင်တီမီတာ) 90.128
အတိအကျ Mass (ဆ / mol) 187.966
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo [3,4-ဃ] Pyrimidine Synthesis လမ်းကြောင်း
ထုတ်ကုန် synthesizing လေးနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ အများဆုံးအကြံပြုလမ်းကြောင်းအောက်မှာပြထားပါတယ်:
တိကျတဲ့ kinases တစ်ခု inhibitor အဖြစ်အလယ်အလတ်တစ်ဦးကဆေးဝါး။
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo [3,4-ဃ] pyrimidine နှင့်ဆက်စပ်အန္တရာယ်
အရေပြားနဲ့တိုက်ရိုက်အဆက်အသွယ်ထိုသို့သောချေး, ယားယံ, နာကျင်ခြင်း, ဒါမှမဟုတ်လာခြင်းအဖြစ်မတည့်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အခါ
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo နှင့်အတူ [3,4-ဃ] pyrimidine ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအစီအမံ
ထုတ်ကုန်နှင့်အဆက်အသွယ်ရတဲ့ကနေသင့်ရဲ့ခန်ဓာကိုယျတစျခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်းရန်သင့်လျော်သောအကာအကွယ်ဂီယာဝတ်ဆင်။ ယင်းအငွေ့သို့မဟုတ်အငွေ့ဓာတ်များကိုရှောင်ရှားရန်, Air-စင်ကြယ်စေအသက်ရှူကိရိယာနှင့်အတူတစ်ဦးမျက်နှာမျက်နှာဖုံးဝတ်ဆင်။ ဓာတု-ခံနိုင်ရည်လက်အိတ်ကိုသုံးပါနှင့် impervious ဘွတ်ဖိနပ်နှင့်အတူသင်၏ခြေကိုဖုံးလွှမ်း။
2. 4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[3,4-d]Pyrimidine (42754-96-1)Engineering Controls
ပြုပြင်ဧရိယာသေချာတဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရေချိုးခန်း, ဓာတုမီးရှို့ဖျက်ဆီး, ပရိသတ်တွေ, အိပ်ဇောလေဝင်လေထွက်, လေသန့်ရှင်းရေးထုတ်ကုန်များနှင့် lockable ပုံးတွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
သူတို့ကိုသင်ရှိပါကအဆက်အသွယ်မှန်ဘီလူးဖယ်ရှားပါ။ မိနစ် 10 မှ 15 အကြောင်းကိုများအတွက်လုံလောက်သော running ရေနှင့်အတူမျက်စိဆေး။ ယားယံဆက်ရှိနေသေးပါက, ချက်ချင်းဆေးကုသရှာကြာလော့။
အများဆုံးလတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေနှင့်အတူတစ်ပွင့်လင်းသောဧရိယာဖို့ဒဏ်ရာရသူရွှေ့ပါ။ အသက်ရှူအခက်အခဲများ၏အမှု၌, အောက်စီဂျင်ထောက်ခံမှုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်နောက်ထပ်ဆေးဝါးကုသစောင့်ရှောက်မှုရှာကြာလော့။
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[3,4-d]Pyrimidine (42754-96-1)Skin contact
အနည်းဆုံးအား 15 မိနစ်ရေနှင့်ပျော့ဆပ်ပြာ၏ copious ပမာဏနှင့်အတူထိုဒေသတွင်ဆေးကြောပါ။ ဆက်ရှိနေသေးယားယံ, နာကျင်ခြင်း, ဒါမှမဟုတ်နီခြင်းရှိလျှင်, ဆေးပညာ Practitioner ထံမှအကူအညီရှာကြာလော့။
နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်နှုတ်တော်ထွက်အလျှော်ရေများများမသောက်ရ, အနည်းဆုံးတစ်ဝက်တစ် liter.Visit တစ်ဦးအဆိပ်ရဲ့အလယ်ဗဟိုမှပမာဏသို့မဟုတ်လက္ခဏာများဆက်လက်အမှု၌ဆေးပညာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထံမှအကူအညီရှာကြာလော့။
4 ။ 4,6-Dichloro-1H-pyrazolo [3,4-ဃ] pyrimidine အသုံးပြုခြင်းလိုက်တဲ့အခါ
ထိုကဲ့သို့သောအငွေ့, အခိုးအငွေ့, ဒါမှမဟုတ်မှုန့်ကဲ့သို့မဆိုထုတ်လွှတ်မှုအသက်ရှူခြင်းကိုရှောင်ပါ
ထိုကဲ့သို့သောဘေးကင်းလုံခြုံမှုရေချိုးခန်းနှင့် eyewash အဖြစ်အရေးပေါ်ထိန်းချုပ်မှုရှိသည်ဖို့သေချာပါစေ
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo [3,4-ဃ] pyrimidine သုံးပြီးပြီးနောက်အောက်ပါအချက်များကိုမှတ်သားယူ:
မည်သည့်ညစ်ညမ်းအဝတ်အစား Remove နှင့်ပြန်သုံးရှေ့တော်၌ဆေးကြောပါ
သင့်လျော်စွာလွတ်ကွန်တိန်နာ, ယိုဖိတ်, ဒါမှမဟုတ်အကြွင်းအကျန်များဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး
7 ။ 4,6-Dichloro-1H-pyrazolo [3,4-ဃ] Pyrimidine (42754-96-1) သိုလှောင်ရေးနှင့်ကိုင်တွယ်မှု
သည်အခြားဓာတုပစ္စည်းများ, အပူ, အစိုဓာတ်ကို, ဒါမှမဟုတ်ဓာတ်အေးဂျင့်မှထိတွေ့မှုကန့်သတ်
ယင်းအငွေ့ဓာတ်များကို minimize လုပ်ဖို့အကာအကွယ်အဝတ်အစားဝတ်ဆင်, ဒါမှမဟုတ်အရေပြားသို့မဟုတ်မျက်စိနှင့်အဆက်အသွယ်အတွင်းဓာတုလာပြီ
8 ။ 4,6-Dichloro-1H-pyrazolo [3,4-ဃ] Pyrimidine မတော်တဆဆောင်ရွက်ချက်များ
ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်, ပေါ်လီမာရေမြှုပ်, အရက်, ဒါမှမဟုတ်ခြောက်သွေ့တဲ့ဓာတုအမှုန့်နှင့်အတူမီး extinguishing မတိုင်မီအကာအကွယ်အဝတ်အစားကိုဝတ်ဆင်။
အဆိုပါယိုဖိတ်အရည် form မှာဖွစျပါတယျသောအခါ, မျက်နှာပြင်ကိုချွတ်ကရုတ်သိမ်းပေးရန်အာဂွန်စုပ်ကိုအသုံးပြုပါ။ အစိုင်အခဲပြည်နယ်အတွက်ဆိုပါကထက်တောင်ဦး, တစ်ဦးအမည်တပ်ထားသောကွန်တိန်နာအတွင်းဖြန့်ချိခြင်းနှင့်ဒေသခံများနှင့်ဖက်ဒရယ်စွန့်ပစ်စွန့်ပစ်ခြင်းစံချိန်စံညွှန်းနှုန်းအဖြစ်များဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး။ ထိုဒေသတွင် clean ကြောင့်လေခတ်။ အဆိုပါ spillage စံရေလိုင်းများသို့မဟုတ်ရေနုတ်မြောင်းအတွင်းစီးဆင်းခွင့်ပြုပါဘယ်တော့မှမ။
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo [3,4-ဃ] pyrimidine မွငျ့မားသောအပူချိန်, အပူ, အားကြီးသောဓာတ်အေးဂျင့်များ, အက်ဆစ်နှင့် bases.The မူလတန်းပြိုကွဲထုတ်ကုန်အထိခိုက်မခံဖြစ်ပါသည်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်, ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကလိုရိုက်, နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်ဖြစ်ကြသည်။
အထူးစွန့်ပစ်အတိုင်းကုန်ပစ္စည်းကိုင်တွယ်နှင့်ဒေသခံ, ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ဖက်ဒရယ်စည်းမျဉ်းနှုန်းအဖြစ်များဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး။ အကောင်းဆုံးကတော့, သင်တစ်ဦးကမီးလောင်ပေါက်ကွဲလွယ်တဲ့ဒြပ်ပေါင်းများနှင့်အတူကပေါင်းစပ်ကာ burner နဲ့တစ်ဦး scrubber နှင့်အတူ outfitted သောဓာတုမီးရှို့ဖျက်ဆီးထဲမှာသူတို့ကိုရှို့နိုင်ပါတယ်။
11 ။ (42754-96-1) သင်္ဘောအင်ဖို
အဆိုပါထုတ်လုပ်မှု, အရေအတွက်နှင့် 4,6-Dichloro-1H-pyrazolo ၏တံခါးခုံကိုအဆငျ့ [3,4-ဃ] Sara ခေါင်းစဉ် III ကို, အပိုင်း 302 နှင့် 313 ၏လိုအပ်ချက်များကိုချိုးဖောက်မဟုတ် pyrimidinedo ။ ဒီထုတ်ကုန်ကိုင်တွယ်နှငျ့ပတျသကျသောအမူအကျင့်သင့်ရဲ့ဧရိယာရဲ့ကုဒ်အတိုင်းလိုက်နာမှအာမခံပါသည်။
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo [3,4-ဃ] Pyrimidine နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု:
ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံရှိသိပ္ပံပညာရှင်များဓာတုပေါင်းစပ်, အသက်နှင့်ပစ္စည်းသိပ္ပံ, Chromatography, သုတေသနခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ထို့ထက် ပို. သူအပေါင်းတို့ဒေသများရှိ excel ။
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo [3,4-ဃ] Pyrimidine (42754-96-1) အစုလိုက်မှာယူမှု & စျေးနှုန်း
သငျသညျ 4,6-Dichloro-1H-pyrazolo အမြောက်အမြားသင့်ရဲ့သုတေသန, ဖွံ့ဖြိုးရေး, ဒါမှမဟုတ်ပေါင်းစပ်များအတွက် [3,4-ဃ] pyrimidine လိုအပ်ခဲ့လျှင်, ကျွန်တော်တို့တစ်ဦးထံမှအမိန့်နေရာအခမဲ့ခံစားရသည်။
ဇီဝနည်းပညာသတင်းအချက်အလက်, အမေရိကန်သည်အမျိုးသားလုံခြုံရေးရေးစင်တာ။ ဆေးပညာ, Pubchem, အနက်အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[3,4-d]Pyrimidine (42754-96-1)ကဏ္ဍများ 1-11 ။
Lagoja, အိုင်ရင်းအမ် (2005) ။ "သဘာဝဇီဝလှုပ်ရှားမှုဒြပ်ပေါင်းများမဲဆန္ဒရှင်များအဖြစ် Pyrimidine" (PDF ဖိုင်) ။ ဓာတုဗေဒနှင့်ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ. 2(1): 1-50